Hay'ada Caafimaadka Sweden oo badashey Sharciyada Karantiilka iyo Kuwa Shaqooyinka ee Dadka Xanuunka Qaba
HomeWararka CaalamkaHay’ada Caafimaadka Sweden oo badashey Sharciyada Karantiilka iyo Kuwa Shaqooyinka ee Dadka Xanuunka Qaba
January 21, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Wararka Sweden 0
Dowlada Sweden ayaa guud ahaan isbadal ku sameysay Xeerarka dhanka karantiilka ee wadanka ka jira oo saameyn xoogan ka dhalatay.
Sharciyada iyo Xeerarka la badalay waxaa kamid ah in Qofka uu Shaqadiisa aadayo xitaa hadii qof qoyska kamid ah uu qabo xanuunka.
in dadka aan laga maarmin dhanka shaqada ay shaqada tagi karaan marka qofk qosyka kamid ah uu qabo xanuunka iyadoo la eegayo qataraha jira.
Xeerarka Karantiilka ee la badaley
Talooyinka cusub waxaa ka mid ah in laga dhaafo Karantiilka Qofka xiriir la sameeyay Qof qaba cudurka ee jooga guriga uuna aadi karo Shaqada ama iskuulka hadii
Haddii ay qaateen qiyaasta saddexaad ee tallaalka.
Haddii ay qaadeen cudurka ‘coronavirus’ saddexdii bilood ee la soo dhaafay.
Haddii loo baahdo, shaqaalaha muhiimka ah ee hawlaha muhiimka ah waxay ku soo laaban karaan shaqada xitaa haddii xubin qoyska ka mid ah uu cudurka qabo. Tani waxay u baahan tahay in la qaado tallaabo lagu dhimayo khataraha.
Muddada joogitaanka guriga marka uu jiro qof cudurka qaba guriga ayaa laga badaley 7 ilaa 5 maalmood qof kasta.
Qof kasta oo qaba COVID-19 wuxuu ku laaban karaa shaqada ama dugsiga ka dib ugu yaraan shan maalmood, haddii labadii maalmood ee la soo dhaafay ay asymptomatic ahaayeen kuwa aan muuqan. Tani waxay sidoo kale khuseysaa kuwa aan awoodin inay Corona iska qaadaan.